I-YouTube itshintsha ilogo yayo kwaye yongeza imisebenzi emitsha | Iindaba zeGajethi
I-YouTube itshintsha ilogo yayo kwaye yongeza imisebenzi emitsha
I-YouTube yenye yeenkonzo ezithandwa kakhulu nguGoogle. Inkonzo yevidiyo kwi umchachazo onwabela isabelo sentengiso esiphezulu esifikelela Abasebenzisi abayi-1.500 yezigidigidi ngenyanga. Nangona kunjalo, okoko yabonakala kwi-intanethi yenzeka kwiminyaka eli-12 eyadlulayo, ilogo yayihlala ihleli.
Olona tshintsho lukhulu kwimemori. Kwaye oko ukusukela ngoku ukuya phambili I-YouTube ayizukuwenza ugxininiso kwigama elithi 'Tube'. Kwaye ligama lesiNgesi libhekisa kumabonakude ngendlela engacwangciswanga. Kodwa umabonwakude wexesha elidlulileyo, abo babesebenza ngeetyhubhu zekathode. Yayingumabonakude weCRT. Ngoku, obu buchwephesha budlulile kwaye butyhila ukungakhathali kukaGoogle ekuhlaziyeni lo mbono wenkonzo.
Ngoku igama elithi YouTube liya kwandulelwa ngumqondiso obomvu othi 'Dlala'. Oko kukuthi, i-TV ebomvu isuswe kwigama elithi 'Tube' kwaye igama lenkonzo lishiywe limnyama ngokupheleleyo. Ngokunjalo, kunye nolu hlengahlengiso lwe logo, inkonzo ikwazisa imisebenzi emitsha, kokubini kwinguqulelo yayo yedesktop nakwinguqulelo yayo yeselfowuni. Ukuba izixhobo ezitsha azikafiki okwangoku, ungakhathazeki kuba ngekhe kushiyeke okuninzi.
Kuqala siza kuya kwinoveli ephambili Kwinguqulelo yakho yedesktop kukuba ngoku unokutshintsha umbala ongasemva wenkonzo. Ngoku ukusuka kwindawo yesiqhelo ukuya kubumnyama kuya kuba ngumcimbi wokucofa kwifoto yakho yeprofayile. Nje ukuba ube lapho kuya kufuneka wenze umsebenzi 'woMxholo omnyama'.
Okwangoku, kuhlobo lweselfowuni amanqaku amatsha ahlukeneyo. Umzekelo: ngoku unako Yonwabela iividiyo ezimileyo isikrini esiphelele. Ngokufanayo, ungabuyela umva umva ngempompo kabini ikhusi kwicala lasekhohlo. Okanye unako ngokuthepha ngaphambili kwicala lasekunene lesikrini. Kwelinye icala, ngoku unokuthatha isigqibo sokudlala kwakhona kweevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-YouTube itshintsha ilogo yayo kwaye yongeza imisebenzi emitsha
U-Aston Martin ukwalibala nedizili nepetroli, yonke i-hybrid kunye nombane
I-Samsung Galaxy S8 vs iNqaku 8